Kenya - Gpedia, Your Encyclopedia
- Gudoomiyeha maxkamadda sare David Maraga
Kenya , si rasmi ah Jamhuuriyadda Kenya (), waa waddan ku yaal Bariga Afrika . Baaxada Kenya waa 580,367 kiiloomitir oo laba jibbaaran (224,081 sq mi), waa dalka 48aad ee adduunka ugu weyn marka loo eego guud ahaan bedka. Iyada oo ay ku nool yihiin dad ka badan 47.6 milyan oo qof tirakoobka 2019,  Kenya waa waddanka 29aad ee ugu dadka badan.  caasimada Kenya iyo magaalada ugu weyn waa Nairobi , halka magaaladeeda ugu da'da weyn iyo caasimada ugu horeysa ay tahay magaalo xeebeedka Mombasa . Magaalada Kisumu waa magaalada saddexaad ee ugu weyn sidoo kale waxay leedahay deked gudaha ah oo ku taal harada Warta Victoria . Xarumaha kale ee magaalooyinka ee muhiimka ah waxaa ka mid ah Nakuru iyo Eldoret . Laga soo bilaabo sanadka 2020, Kenya waa dalka seddexaad ee ugu dhaqaalaha badan wadamada Saxaraha ka hooseeya marka laga reebo Nigeria iyo Koonfuur afrika.  Kenya waxaa xuduud la leh Koonfurta Suudaan dhinaca waqooyi-galbeed, Itoobiya dhinaca woqooyi, Soomaaliya dhanka bari, Ugaandha dhanka galbeed, Tanzania dhanka koonfureed, iyo Badweynta Hindiya dhanka koonfur-bari.
Marka loo eego taariikhda qadiimiga ah ee waxyaabaha la xidhiidha iyo waxyaabaha lafaha ah, dadka Kuushiitiga waxay markii ugu horreysay degeen dhulka hoose ee Kenya intii u dhaxeysay 3,200 iyo 1,300 dhalashadii Nabi Ciise ka hor csw, marxalad loo yaqaan 'Lowland Savanna Pastoral Neolithic' . Dadka reer guuraaga ah ee ku hadla afka Nilotik (waxay ku abtirsadaan dadka reer Kenya ee ku hadla afka Nilotik) waxay bilaabeen inay ka haajiraan dhulka maanta loo yaqaan Koonfurta Suudaan una soo guuraan Kenya qiyaastii 500 BC.  Xiriirka reer Yurub wuxuu ka bilaabmay 1500 Boqortooyadii Boortaqiiska , in kasta oo gumaysiga wax ku oolka ah ee Kenya uu bilaabmay qarnigii 19aad xiligii Yurub sahaminta ka waday gudaha . Kenya maanta waxay ka soo baxday maxmiyad ay aas aastay Boqortooyadii Ingiriiska 1895 iyo Gumaysigii Kenya ee xigay, , oo bilaabmay 1920. khilaafaadyo badan oo udhaxeeyay UK iyo gumaysiga ayaa u horseeday kacaankii Mau Mau , oo bilaabmay 1952, iyo ku dhawaaqistii madaxbanaanida ee xigta 1963 kadib xornimadii, Kenya waxay xubin ka noqotay Dalalka Barwaaqo Sooranka .Dastuurka hadda jira ayaa la ansixiyay 2010 si loogu badalo 1963.
Majakos -144,109 qof
↑ kenya.opendataforafrica.org https://kenya.opendataforafrica.org/msdpnbc/2019-kenya-population-and-housing-census-population-by-county-and-sub-county?county=1001880-limuru. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenya&oldid=210454"